Cuntooyinka Cuntooyinka Thanksgiving-ka Cusub ee Laga Soo Kordhiyey Qasriga Cad
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Cuntooyinka Cuntooyinka Thanksgiving-ka Cusub ee Laga Soo Kordhiyey Qasriga Cad
Qasriga Cad waxa uu sanadkan ku soo bandhigayaa Thanksgiving laba cunto oo cusub, oo mid ka mid ahi si gaar ah loogu daah-furay OnlyFans. Bacon Jalapeño Cheese Slider Stuffing iyo Koonfur-galbeed Jalapeño Cheese Slider Stuffing, kala duwanaanshiyaha ugu dambeeyay ee White Castle ee cuntada asalka ah, waxay hubaal ahaan ku dari doontaa kulayl kasta miiska cashada. Thanksgiving-kan ayaa calaamad u ah sannad-guuradii 30-aad ee soo-saarkii ugu horreeyay ee cuntada la sii daayo 1991-kii.
Sida magacyadooduba tilmaamayaan, labada nooc ee walxuhu waxay u adeegsadaan White Castle's basbaaska Jalapeño Cheese Slider oo ah walxaha ugu muhiimsan.
"Xilliga fasaxa wuxuu ku dhow yahay inuu aad u kululaado sababtoo ah cuntooyinkan ayaa runtii buuxiya kulaylka," ayuu yiri Jamie Richardson, madaxweyne ku xigeenka White Castle. "Slider-kayaga Jalapeño Cheese Slider waa shay caan ka ah maqaayadaheena iyo dariiqyada qaboojiyaha raashinka, marka waxaan ognahay in Cravers ay jecel yihiin cuntooyinkan cusub ee kulul iyo basbaaska leh."
Qasriga Cad waxa uu la shaqeeyay dab-damiyayaal fadhigiisu yahay Florida iyo cunto kariyaha si uu uga caawiyo in ereyga laga soo saaro cuntooyinka cusub ee cuntada. Manny Washington Jr., madaxa degmada ee Waaxda Dabka ee Orlando iyo shakhsiyad caan ah oo warbaahinta bulshada ah, ayaa tusi doonta taageerayaasha sida loo sameeyo Bacon Jalapeño Cheese Slider Stuffing, oo ay ku jiraan qaybo hilib doofaar ah oo qallafsan, basbaaska jalapeño la jarjaray, celery, cilantro, cumin iyo la jarjaray. jiis jack basbaaska, dhammaan isu imaanaya si ay u abuuraan mid-of-a-nooc dhadhan kulul iyo basbaas. Qoraalkiisu wuxuu ka soo bixi doonaa kanaalka White Castle ee YouTube-ka iyo akoonnada Facebook, Twitter iyo Instagram.
Oo tusinaya dhinaceeda basbaaska leh, White Castle waxay soo bandhigaysaa ka kulul iyo xawaashka Koonfur-galbeed Jalapeño Cheese Slider Slider Stuffing kaliya eeFans, madal warbaahinta bulshada ee ku saleysan is-diiwaangelinta oo leh in ka badan 180 milyan isticmaaleyaasha diiwaangashan iyo in ka badan 2 milyan oo abuuryaasha adduunka oo dhan. Noocani wuxuu kulaylka u qaadaa heerka ku xiga isagoo ku daraya jalapeño dheeraad ah iyo basbaaska poblano iyadoo weli la muujinayo dhadhanka walxaha dhaqameed ee aad taqaan iyo jacaylka. Taageerayaasha White Castle waxay arki karaan cuntada gaarka ah ee astaanta cusub ee OnlyFans profile.
"Waxa ugu weyn ee ku saabsan noocyada Bacon iyo Koonfur-galbeed ee Jalapeño Cheese Slider Stuffing waa inaad ka dhigi kartaa mid kulul oo basbaas leh sida aad jeceshahay," Richardson ayaa yidhi. "Kuwani waa cuntooyin dhinac ah oo loogu talagalay Thanksgiving iyo dabbaaldegyada saaxiibada."
Iyada oo kaabaysa cuntooyinkan cusub ee kulul, qalcadda White Castle waxa ay haysaa iibka dabka daabacaadda dhalashadiisa 100aad ee xaddidan "Cravey Boat." Waxaa laga heli karaa White Castle's House of Crave dukaanka hadiyadaha online-ka ah, Doonta Cravey waxay ku fiican tahay maraqa, fondue, hollandaise iyo suugada kale ee xiisaha leh. Waxa lagu heli karaa kaliya $15.
Intaa waxaa dheer, White Castle waxay siinaysaa Combo Castle bilaash ah #1-#6 ama Combo Quraac bilaash ah dhammaan dabdemiska ka shaqeeya Thanksgiving. Looma baahna wax kuubboon ama iibsi, in kasta oo dab-demiyeyaasha laga codsado inay muujiyaan aqoonsiga oo ay yimaadaan galabka ka hor maadaama makhaayado badan ay goor hore xidhmayaan fasaxa.
Cuntooyinka cusub ee fudud laakiin macaan ayaa imanaya sannad-guurada 30aad ee Cuntada asalka ah ee Slider®. Cunto karintu waxay soo bilaabatay 1991, markii xubin ka tirsan kooxda White Castle ay ku wanaajisay cunto karinta qoyska ayeeydeed oo ay ku jirto jawaan Sliders ah. Wixii markaas ka dambeeyay, walxaha Slider-ku-saleysan ee caanka ah ma ahan oo kaliya dhaqanka Thanksgiving, laakiin sidoo kale soo dhaweyn casho ah oo sanadka oo dhan ah loogu talagalay qoysaska Craver ee Mareykanka oo dhan
Sannadka 2019, qoysku waxay lahaayeen cunto-dhakhso leh iyo shirkadda alaabta baakadaysan ee macaamilka waxay soo bandhigtay nooc waxyar dib loo eegay oo ah cunto kariskeedii asalka ahaa ee Slider Stuffing si ay uga rafcaan khudradda iyo khudradda. Isticmaalka Impossible ™ Slider sida walaxda ugu muhiimsan, Qalab cad oo aan macquul ahayn ™ Slider Stuffing ayaa siisay kuwa aan hilibka cunin fursad ay ku raaxaystaan ​​dhadhanka qof kastaa uu ku caan baxay.
White Castle Cravers waxay ka iibsan karaan Sliders Original iyo Jalapeño Cheese Sliders qaybta qaboojiyaha ee dukaamada raashinka ee dalka oo dhan. Sliders Original, Jalapeño Cheese Sliders iyo Impossible™ Sliders waxaa laga iibsan karaa makhaayadaha White Castle. Cuntooyinka cuntada lagu kariyo ayaa hoos lagu bixiyaa. Wixii fikrado cunto karis ah oo dheeraad ah oo gaar ah oo la isticmaalayo alaabta menu ee White Castle, booqo www.whitecastle.com/food/recipes.
Kala duwanaanta sii kordheysa ee qalfoofka cadceedda cuntada ayaa soo jiidan doona noocyo kala duwan oo dhadhan Craver ah. Saddex cunto-cunista ayaa hoos ku taxan. Midda afraad - iyo tan ugu kulul - cunto karinta ayaa hadda laga heli karaa White Castle's OnlyFansprofile.
White Castle®Bacon Jalapeño Cheese Slider Walxaha
Waqtiga diyaarinta: 20 daqiiqo
Waqtiga karinta: 45 ilaa 50 daqiiqo
Adeegyada: 4 ilaa 6
1. 12 White Castle® Jalapeño Jiis Sliders
2. 10 qaado oo subag ah
3. 1 koob celery, la jarjaray
4. 1 basbaas jalapeño ah, oo si fiican loo jarjaray
5. 10 xabbo oo hilib doofaar ah, la kariyey oo la jarjaray (qiyaastii 1¼ koob)
6. 1 qaado oo milix ah
7. ½ qaado oo basbaas ah
8. 1½ qaado oo khamiir ah
9. ¼ koob cilantro, jarjaran
10. ¾ koob turki ama maraq digaag
12. 1 koob oo jiis jaakad basbaas la shiiday
1. Ku dhalaali subagga digsi weyn kulayl dhexdhexaad ah. Ku dar celery la jarjaray iyo basbaaska jalapeño oo kariyo ilaa jilicsan.
2. Kuleyli Sliders sida waafaqsan tilmaamaha xirmada. U jar afar meelood.
3. Madiibad ama digsi weyn oo isku qasan, ku qas Sliders rubuc leh hilib doofaar la jarjarey, milix, basbaas iyo khamuun. Ku qas cilantro iyo khudaarta ka soo baxday digsiga. Haddii aad ku karisid walxaha turkiga, ku dar jiiska jaakada basbaaska halkan, sidoo kale.
4. In baaquli yar, isku qas maraq iyo ukunta. Ku shub walxo isku dar ah oo walaaq ilaa si siman loo qaybiyo.
5. Ku rid isku darka walxaha ku jira saxan dubista 9×13 oo ku korso jiis jack basbaas ah.
6. Dubo at 350 darajo 30 daqiiqo oo daboolan. Ka dibna qaawi oo sii wad karinta ilaa inta ay dusheeda ka browned tahay, ilaa 15 ilaa 20 daqiiqo oo kale.
White Castle®Cuntada Alaabta Slider Asalka ah
Waqtiga diyaarinta: 5 ilaa 10 daqiiqo
Waqtiga la kariyo: daqiiqado 35
Adeegyada: qiyaastii 9 koob oo walxo ah (ku filan turki 10 ilaa 12 rodol)
1. 10 ilaa 12 White Castle Sliders Original, aan lahayn pickles (laga bilaabo makhaayadda Castle ama dukaanle maxalli ah)
2. 1½ koob oo celery la jarjaray
3. 1¼ qaado shaah oo la shiilay oo la shiiday
4. 1½ qaado shaah xikmad ah oo dhulka ah
5. ¾ qaado shaaha basbaaska madow oo aan dhab ahayn
6. ¼ koob maraq digaag (ama 1 koob oo nooca qasacadaysan)
1. U jeex Sliders-ka qaybo cabbirkoodu le'eg yahay oo ku rid baaquli weyn oo isku dhafan.
2. Ku dar seleri la jarjaray iyo xawaash.
3. Ku dar ¼ koob oo maraq digaag ah oo si fiican u tuur.
4. Ku rid walxaha ku jira godka turkiga oo u kari sida caadiga ah.
5. Haddii aad wax karinayso sida digsi, ku dar ¾ koob oo maraq digaag ah oo si fiican u rog.
6. Ku buufi ama saliid 2-quart saxan saxan ah.
7. Ku wareeji walxaha ku jira weelka dubista oo ku dub 350 darajo 35 daqiiqo.
White Castle® Aan Macquul Ahayn,Waxyaabaha Slider
Adeegyada: qiyaastii 9 koob oo walxo ah
1. 10 White Castle® Impossible™ Sliders, oo aan lahayn pickles
6. 1 koob oo maraq khudradeed
1. U jeex Sliders-yada Aan Macquul ahayn oo u kala jeex xajmi weyn oo ku rid baaquli weyn oo isku qasan.
3. Ku dar 1 koob oo maraq khudradeed ah oo si fiican u tuur; maaddooyinka ha fadhiistaan ​​10 daqiiqo si ay u nuugaan.
4. Ku buufi ama saliid 2-quart saxan saxan ah.
5. Ku wareeji walxaha ku jira weelka dubista oo ku dub 350 darajo 35 daqiiqo.